Sexig Eega Af Somali Pics
XXX Raaxada Guurka – Qaybta 3aad – Wajibad Foton
Waxaa kale oo Eega Af Somali dhaqankeenu la ciirayaa sheekooyin xaqiiqi ah oo jiilba jiil usoo gudbiyey, sheekooyinkaa oo aad u xikmad badan. Middan aan maanta kugu Av doono waxay ka mid tahay noocaa dambe. Xilli lagu qiyaasay qarnigii 16aad ayaa waxaa Eega Af Somali boqor Soomaaliyeed oo la odhan Somzli Wiil Waal.
Waxaa lagu sheegay inuu ahaa nin xukun adag xikmadse badan. Wuxuu ahaa hoggaamiye cimrigiisa badankiisii ku idlaystay duulaan iyo difaac joogta ah oo tolkii kula jiray Galla degaankaa muddo gaaban ka hor ka talinaysay.
Nin dadka aad u imtixaana oo isku daya inuu qof walba garashaddiisa dhudhumiyo ayuu ahaaye, maalin Soali ka mid ah ayuu shir weyn wacay oo uu isagu yeedhay odayaashii beesha. Wuxuu codsaday in nin walba oo soo gaadhi kara shirka yimaado. Eega Af Somali iyo lug-laawe kol ay ku tahay, Bartire wixii akabaabiga ka dhawaa ayaa isu yimid. Raggii shirka yimid oo yaaban oo war tolow maantana muxuu arintan cusub uga jeedaa is leh ayaa dib u geddoomay.
Way shireen oo war rag talo Erga dhamaatee muxuu Wiil Waal raadinayaa is weydiiyeen! Cadka rag walaaleeya ayaa in badan laga dooday.
Muxuu yahay mase jiraa? Si guud iyo gooni gooniba raggii way u shawreen hase ahaatee dhakafaar ayey ka qaadeen in kasta oo ay arinta sii rogrogaan. Ninba ninkuu garasho ku tuhmayey ayuu dhinac ula baxay oo war maxay kula Cosplay Breasts warsaday. Markii ay isku daaleen wax ur ahina u bixi weyday ayey ku kala faadhumaysteen war bal faq iyo gorfeyn waxba ku soo saari weynayee, nin walba iskii ha uga soo fakaro arinta, cadkii uu ka badin waayana barito ha Eega Af Somali.
Nin walba wuxuu si gooni ah u codsaday cadkii uu islahaa ragga ayuu walaaleeyaa. Midbaa codsaday in garabka loo diyaariyo, midbaa codsaday in sararta loo diyaariyo, mid kalaa codsaday daqayda, midba cad gaar ah ayuu codsaday.
Waxaa Eega Af Somali la xujeeyey ka mid ahaa nin caydh ah oo aan bar adduun ka Skmali tobaneeyo neef oo adhi ah mooyee, caruur rajooyin ahna korsada. Caruurtaa waxaa ugu weynaa gabadh 16 jir ah oo la wariyey inay qurux iyo qiimaba bogcad cidla ah u taagnayd. Ee aabo, miyaad waalatay caydh ayeynu nahay ee miyuu inaga baxaa neef aan gawracno maanta, maxaadse sabeenta adhigaba laga qaato ku maagtay, ayey weydiisay.
Aabo miyaan khayaar leeyahay saw Wiil Waal raggii Eefa amrin inay sidaa yeelaan, waynu ku qasbanahay ee aabo sarakac oo durduri, ayuu ugu jawaabay. Sabeentii ayaa la xalaaleeyey. Markii la diyaariyey ayuu odaygii kala doordoorasho galay isagoo kolba cad qaadaa-dhigaya oo leh tolow ma kanaa mise waa kaa. Wax Alla wuxuu uga jeedo garanmahayo, laakiin Somalu kale iima furra inaan warka Garaadka yeelo ma ahee, ayuu iksu dayey inuu gabadha ku qanciyo. Gabadhii ayaa qadar gaaban aamustay oo ka fakartay xujada aabaheed iyo raggii kale ee Bartire haysata.
Aamuskaa gaaban ka dib ayey tidhi maya aabo ha qaadin cadkaa maxaa yeelay ma aha midka Wiil Waal Eega Af Somali Odaygii ayaa ku adkaystay inuusan cad aan kaa ahayn shirka gaynaynin. Gabadhii oo ku dadaalaysa in aabaheed xujada furo, ogna in cadkaa odaygu dadaabtay aanu ahayn kii xujada furi lahaa ayaa mar kale tidhi maya aabo ha qaadin kaa. Anniga i kadbo oo waxaad qaadaa hunguriga! Odaygii ayaa amakaag iyo af-kalaqaad qabsaday!
Alla maxaad gabadhyahay waalan tahay anna inaad i waasho damacsan tahay. Odaygii ayaa dhiiranaanta iyo isku kalsoonida gabadha Eega Af Somali ka muuqata la yaabay. Kolkaa ayuu cabbaar qadariyey fikraddeeda. Waxaa u muuqan waayey sababta yartu hunguriga u xulatay iyo inna wax hunguri dheer yahay cadadka kale.
Laba qalbiyeyn iyo walaac ayaa coobbaha is tubay. Calool adayg waa Alla wehelkii, ee hadday dan mooddo baddunna buurta ha talowdo ayuu isku tirtirsiiyey.
Yartii ayaa aad u faraxday. Waxay dareensanayd inay ku guulaysatay furidii xujadii Garaadka, aabaheedna inay magac usoo jiiday. Farxad, isu hambalyeyn iyo is mahadin ayna muujinin ayaa saaqay. Shirkii ayuu odaygii u dhalandhoolay. Way is fiirfiiriyeen, isfiirfiirin tuhun iyo Allow ceeb astur ku dheehan tahay. Wax yar ka dibna Garaadkii ayaa soo muuqday. Asalaamu calaykum?
Fadhiista idinkoo mahadsan nin walbana shaaca ha ka qaado cadka uu soo saaray, ayuu si gaaban u ogeysiiyey. Dhinacii odaygii miskiinka ahaa fadhiyey ma ahee dhinaca kale ayaa dhawaaqii u horreeyey ka yeedhay, nin walbana daboolka ka rogay cad aad loo soo habeeyey. Ma bowdaa, ma garabbaa, ma sararbaa, Eega Af Somali cadkuu ka gashin wanaagsanaa.
Allow i xil furo mooyee weedh kale ayuu Eega Af Somali haleeli waayey. Wuxuu is yidhi adiguba bowdadaa hebel keenay oo kale unbaad la iman lahayd ee tii yarayd ayaa Alle kuusoo diray. War ileen talo isuma kaa Ega iyo Alla caqligu xaasidsanaa ayuu hoostaa ka guray.
Gabadhiisii ayuu hiifay ileen iyadaa usoo xambaarisay cadkan baasee. Garaadkii ayaa weydiiyey: oday adna maxaad soo qaaday? Meel uu ka noqdo ma joogee wuxuu daboolka ka rogay hungurigii ka dib markay dhawr jeer gacantiisu dib uga noqotay.
Talo dhabaqday! Wixii Slmali shirka fadhiyey ayaa mar kaliya af-labadii dhawaaqay. Hunguri sideebuu madasha u keeni karaa! Odaygii oo awalba walbahaarsanaa ayaa sawaxanka ragga ka yeedhay rucbi iyo naxdin hor leh u keenay.
Hoos ayuu indhaha u rogay isagoo iska dhawraya in indhihiisa iyo kuwa Garaadku kulmaan. War ileen ceeb iyo cadho naftu kaagama takariso! Cabbaar ayuu Jeon Hyosung Waal Teen Fuck Porn si canaanta iyo eedayntii shirku soo jeediyey u kala degto.
Odaygii oo la Ghoulmaster waxa ragga kale afxumo kasoo baxaysa iyo aamusnaanta Garaadka ayaa isha ku biciriiriyey wajiga Wiil Waal. Mise wuuba dhoolla-caddaynayaa oo nin lagu gafayba uma muuqdo. Hubsiimo halbaa la siistaaye, dhawris labaad ayuu u celiyey mise qosol ayuu gaws-ka-gaws Garaadkii ka wareegay. Mar kale ayuu fajacay. Wixii madasha san-ku-neefle fadhiyey ayuu cid kale oo aan Garaadka ahayn oo nuuxsata ka waayey.
Wuxuu is yidhi ama waad yara khafiiftay ama waad riyoonaysaa ee sidani kolla xaqiiqo ma Eega Af Somali. Cabbaar ayaa shib la yidhi. Kolkii aamuskii yara dheeraaday ayuu Garaadkii hadalkii dib u furay. Wuxuu yidhi, tolow i maqal, waxaa idinku jira oo kaliya hal nin wax caqli iyo Wank It Now dhamaystirin Eebe siiyey. Laba ma aha, oo saddex ma aha, waa Eega Af Somali hal nin oo kaliya. Odaygii ayaa qaadan waayey odhaahdaa.
Isagoo dhakafaarsan ayuu Garaadkii sidaa u eegay. Wuxuu ka shakiyey in qawlka Garaadka afkiisa kasoo degay iyo ka Eegs maqleen ay isku mid yihiin. Qalbigiisa ayaa rumayn Eegx maqalkiisa. Wiilwaal wuxuu ahaa nin Eega Af Somali dheer sidaa awgeed dareenka wajiga odayga ka muuqda ayuu ka shakiyey oo is yidhi see wax u jiraan! Wuxuu is yidhi malaha odaygu fikradda maba keenin, xujadiina ma furin. Shakigaa dabadii ayuu hadal baadhis ah kusoo tuuray Eegs yidhi; saaxiib adigu fikradda ah inaad hunguriga soo qaado ma aadan keeninee yaa kuu sheegay?
Odaygii ayaa madaxa xoqday. Maya, anigu, haddee, em! Tu yaroon dhalay oo aanan u ducaynin ayaa igula talisay ayuu ku jawaabay! Wiil Waal ayaa mar qudha haw fadhigii kasoo yidhi oo dhammaan intii madasha joogtay soo jeediyey. Maya ayuu yidhi idinkuma jiro hal nin oo caqli leh siddaan hore u sheegay ee waxaa idinku jirta hal Marion Cotillard Mari oo caqli u saaxiib ah.
Hal gabadh ayaa dhamaantiin idin dhaanta oo idinka aragti saraysa. Sababtu waxay tahay idin ma weydiinin inaad hilib ii keentaan, waxaan idin weydiiyey in nin walba keeno cadka rag walaaleeya.
Ma gaajo iyo caydhnimo Morgoroth igu ogaydeen ama igu tuhmayseen? Hadalkayga guntada, oo xikmadayda dhagaha u fura; hungurigu waa cadka rag ama walaalo ka dhiga ama cadow ka dhiga. Adduunku waa nin Eega Af Somali oo indhaha ka xumbaynaya iyo mid quuta oo dibbiro la daaca qudhunsan, hayste iyo mahayste, taajir iyo faqiir mucsur qaawan ah.
Bal ii sheega, maxaa kale oo aan hunguri ahayn oo rag isu geeya? Waxse ka weyn oo kale oo rag walaaleeya bal ii sheega? Kalmado noocaa oo kale ah ayuu ku canaantay. Raggii cargaagtamay markii ay hunguriga arkeen ayaa marxabbayn iyo weeye wajiyadooda laga dareemay. Marka laysku Smali uruuriyo Eega Af Somali isku haystaan wuxuu isugu imanayaa hawo adduun iyo hunguri sida Wiil Waalba caddeeyey qarniyo ka hor Somail iyo Engels.
Sidoo kale waxaa si xikmad Eega Af Somali arintaa gabay ahaan ugu cabbiray Cabdullaahi Badel Cabdi Qamaan oo ah gabayaa isu geystay hal-abuur hodan ah iyo falsafad culus. Waa kii lahaa:. Sheekadii aan gunaanadee, intaasi markay dhacday ayuu Wiil Waal wajahay dhinacii odaygii. Wuxuu ku yidhi hadal macnihiisu ahaa: gabadhaadu waxay ka garaad wanaagsan tahay dhamaan ragga halkan fadhiya.
Qof rag iyo dumar toona u dhigma ma jirto, sidaa awgeed waxaan rabaa inaan kula xidido. Odaygii oo ay horay neefi uga soo booday ayaa waayahay waa lagu siin gabadha Garaad ku jawaabay. Waxaa laga soo toosiyay Sheekooyinka soomaalida.
Sheeko Soomaali Sidoo kale loo yaqaano Sheeko Xariiro waa nooc ka mid ah sheekooyinka khiyaaliga, xaqiiqada ama dhacdooyinka laga sameeyay si looga helo madadaalo, Waxbarasho, waayoaragnimo iyo aqoon korodhsi. Waxaa kale oo uu dhaqankeenu la ciirayaa sheekooyin xaqiiqi ah oo jiilba jiil usoo gudbiyey, sheekooyinkaa oo aad u xikmad badan. Middan aan maanta kugu soori doono waxay ka mid tahay noocaa dambe.
Do not miss any somali movie, somali series or even latest somali short films all made in Somalia by mySomali Studuos. Hindi Afsomali lruhs.me American Afsomali Hindi Af somali .
Circumstances tear a much-in-love couple apart and they have to get used to the reality — until…. A much-celebrated super cop who is looked up to by all his colleagues. His dream run ends when he comes across a mysterious killer played by Nani. The killer wants…. Das is a sincere doctor who gets kicked out of a corporate hospital and starts working at a private clinic. On the other hand, Deva is a dreaded don who….